Saw Ngo – နောက်တခါ လာပြန်ဘီဟေ့ (ကြိုတင်မဲ) | MoeMaKa Burmese News & Media
Saw Ngo – နောက်တခါ လာပြန်ဘီဟေ့ (ကြိုတင်မဲ)
လာပြန်ပြီလား … ဒီ ကြိုတင်မဲ (ကာတွန်း စောငို)
မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၂
2 Responses to Saw Ngo – နောက်တခါ လာပြန်ဘီဟေ့ (ကြိုတင်မဲ)
တမလွန်လူသား on March 20, 2012 at 3:06 pm
ကျုပ်တို့ အလောင်းကောင်တွေကို မဲစာရင်းထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထည့်ထားလို့ မဲပေးရဦးမယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ စစ်အုပ်စုကလည်း အာဏာရဘို့ဆိုရင် လူသေကောင်ကိုပင် အသုံးချပြီး အာဏာကိုယူမဲ့လူစားတွေပါ။
မဲမပေးပြန်ရင်လဲ သချိုင်းကိုဖျက်မှာ။ ဒီလူတွေက လူစိတ်ရှိတဲ့ လူတွေမဟုတ်၊ ကတိသစ္စာလဲ မရှိ။
စစ်သားကြီးတွေ လုပ်ပြီး မိန်းမကျင့် မိန်းမကြံ ကြံနေကြတာ ယိုသူ မရှက်၊ မြင်သူ ရှက်ပါ။
NAI KYAW SEIN on March 21, 2012 at 6:30 pm
ဟေ့ အလောင်းကောင် ငါတို.ဖွတ်မင်းကြီးက မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တခုထဲနဲ.လူအယောက်၁၀၀၀ တထောင်ကျော်ကိုဖွတ်မင်းဘက်ကမဲထည့်ဖို. လုပ်ပေးထားပါတယ်ကွာ မစိုး၇ိမ်ပါနဲ. ဖွတ်မင်းနိုင်၇င် မင်းတို.ကို အုတ်ဂူလှလှလေးတွေလုပ်ပေးမှာပါ